Ny Bokin' i Habakoka dia boky ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly kristiana. Mampita hafatra ny mpaminany fa ny fahoriana dia tsy haharitra: manam-potoana aharetany manokana avy ny zavatra tsirairay, ary ny marina dia tsy maintsy handresy amin’ ny farany. "Fa ny marina ho velon’ny finoany" (Hab. 2.4).
Tsy misy afa-tsy toko telo ny Bokin’ i Habakoka. Ny ankamaroan’ ny mpikaroka dia mihevitra fa ny toko voalohany sy faha-2 dia nosoratan’ i Habakoka, fa nosoratan’ olon-tsy fantatra izay tokony ho niaina taty aoriana kosa ny toko faha-3. Izany fiheverana izany dia tohanan’ ny tsy fisiany ao amin’ ny horonam-boky atao hoe Hevitenin’i Habakoka hita tao Komràno.
Ahitana andalana manana endri-pitenenana fampiasa amin’ ny fanompoam-pivavahana ny Bokin’ i Habakoka ka izay no ieritreretana fa mpaminany mpisorona i Habakoka, na koa mpisorona no nanao ny fadrafetana farany ny boky. Tsy misy zavatra fantatra firy ny amin’ ny fiainan’ ilay mpaminany.
Tsy mora ny mamaritra ny fotoana nanoratana ny boky. Na dia izany aza, ny filazana ny Kaldeana izay asehon’ ny boky ho fitaovana nampiasain’Andriamanitra (Hab. 1.6) dia hoatra ny mampiseho fa tamin’ ny fotoana nanjakan’izy ireo, tamin’ny taonjato faha-7 tal. J.K., izany hoe taorian’ny taona 626 tal. J.K., izay nandreseny ny Asiriana izany. Mazavazava kokoa anefa ny famaritana ny fotoana nanoratana raha fantarina ireo "mpampahory" sy ireo "olo-marina" voalaza ao amin’ny boky.
Raha ny Asiriana ireo "mpampahory" ireo ary ny Jiosy tao Jodà ireo “olo-marina” ireo, dia tokony ho talohan’ny taona 612 tal. J.K., fotoana nahalavoan’ ny Fanjakana asiriana, no nanoratana ny boky. Raha izany no marina, ny toritenin’ i Habakoka dia fanambaràna ny haharavan’io fanjakana io, izay firenena lozabe nangeja ny mponin’i Jodà.
Raha ny Kaldeana kosa no lazaina ho io firenena mpampahory io, ireo teny nataon’ i Habakoka dia mety hifandray amin’ ireo zava-niseho taona maro talohan’ny nahazoan' ny Kaldeana an’ i Jerosalema (taona 597 tal. J.K.), na koa fotoana kely torian’ izany. Ny maha tsy mazava ny Bokin’ i Habakoka dia miteraka fipoirana fivoasana samihafa.
Fahorian'ny marina (1.1 – 2.5)Hanova
Fanozonana ny firenena mpampahory (2.6 – 2.20)Hanova
Salamon'i Habakoka (3.1 – 3.19)Hanova
Ny akon’ny Bokin’i HabakokaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Habakoka&oldid=1041931"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 06:04
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 06:04 ity pejy ity.